किन लाग्छ डर ? – Janasamsad
शुक्रबार, साउन १६, २०७७ १३५०३६
हामीलाई आफुलाई लागेको गर्न पनि डर लाग्छ । आफुलाई भन्न मन लागेको कुरा भन्न डर लाग्छ । किन ?
किनभने हामी डरै डरमा हुर्कियौं ।
हामीलाई धर्मको डर देखाइयो । भूतको डर देखाइयो । लाजको डर देखाइयो । सजायको डर देखाइयो ।
जतिबेला हामी बुझ्ने भयौं । स्कुल जान थाल्यौं । आमाबुबा, घरपरिवार, शिक्षक-शिक्षिकाले हामीलाई डर देखाउन डर । डर यसकारण कि, डरको कारण नराम्रो काम नगरोस् भनेर । तर, त्यही डरले हामीलाई यसरी गाँज्न थाल्यो कि , राम्रो काम गर्न आँट गर्न समेत हामी डराउन थाल्यौं ।
असफल हुने डर
हामीलाई लाग्ने सबैभन्दा डर हो, असफल भइएला कि भन्ने । हामी कुनै काम सुरु गर्नुअघि एउटै कुराले हतोत्साही बनाउँछ, असफल भइने त होइन ?
परीक्षामा असफल हुने डर । उद्यम व्यवसायमा असफल हुने डर । डरै डर । जब हामी डराई डराई कुनै काम गर्छौं, हाम्रो कार्यक्षमता कमजोर हुनपुग्छ । जुन शक्ति र लगावका साथ हामी अघि बढ्नुपर्ने हो, सक्दैनौं । डरले हामीलाई थिचेर राख्छ ।
हानी हुने डर
हामीमा के मानसिकता हुन्छ भने, जे गर्छौं, जति गर्छौं त्यसको पूणर् नतिजा हासिल होस् । व्यवसाय सुरु गरेका छौं भने घाटा लाग्ने डर हुन्छ । पढाई गरिरहेका छौं भने कमजोर भइएला भन्ने डर हुन्छ । यस्ता डरले हामीलाई अठ्याएर टाउको उठाउनै दिदैन ।
गल्ती हुने डर
हामीलाई लाग्ने अर्को डर हो, गल्ती पो होला कि ?
गल्ती हुने डरकै कारण हामी केही पनि काम सुरु गर्दैनौं । कुनैपनि प्रयास गर्दैनौं । जब केही गर्छौं, केही भन्छौं । गल्ती होला भन्ने डर लाग्छ । त्यही डरले हामीलाई केही प्रयास गर्न नै दिदैन । जबकी काम गर्दा गल्ती हुन्छ । गल्ती हुनु मानविय कुरा पनि हो । मानिस रोबोर्ट होइन । र, हरेक गल्तीले केही न केही पाठ सिकाउँछ ।
अर्काले केही भन्ने हो कि भन्ने डर
हामी जब केही गर्ने सोंच बनाउँछौं । तब मनमा एउटा कुरा खेल्न थाल्छ, अर्काले केही भन्ने हो कि ?
अर्काले के सोच्छन्, के भन्छन् भनेर हामी सधै सर्तक रहने प्रयास गर्छौं । जबकी आफुलाई सोध्दैनौं, यो ठिक वा बेठिक ? के मैले सही गरे ?
यदि आफ्नो मनले सही गरेको भन्ने निचोड निकाल्छ भने अरुले केही भन्छ कि भनेर किन डराउनु ?
डरको अघि जीत भनिन्छ नि, डरको अगाडि जीत छ ।
जब हामी डरलाई छिचोलेर अघि बढ्छौं । तब जीत हासिल हुन्छ । जब हामी डराएर कुनैपनि कामबाट हात झिक्छौं, कुनै काम गर्ने प्रयास नै गर्र्दैनौं भने त्यसले हामीलाई जहिले पनि प्रगति पथमा लम्कनबाट रोक्छ । तर, जब डरलाई जित्छौं । हाम्रो अगाडिको बाटो खुला हुन्छ । हामी निर्धक्क अगाडि बढ्न सक्छौं । अनलाइन खबरबाट